साताको तस्वीर : बलेवा बिमानस्थलमा विमान ! – ebaglung.com
साताको तस्वीर : बलेवा बिमानस्थलमा विमान !
२०७४ चैत्र ५, सोमबार १७:०३	Footer Slider, Full Slider, Top News, अन्य समाचार, विचित्र
शव्द/चित्र : किरण आचार्य, बागलुङ २०७४ चैत ५ । बागलुङको बलेवा बिमानस्थलमा तारा एयरको ट्विनओटर विमानले परीक्षण उडान भरेको छ । २६ बर्ष देखि बन्द रहेको बलेवा विमान स्थलबाट चैतको दोस्रो सातादेखि नियमित विमान सेवा संचालन गर्ने गरि पहिलो पटक सोमबार तारा एयरलाइन्सले परीक्षण उडान गरेको हो ।
विमान संचालनको लागि बागलुङ नगरपालिका र नेपाल एयरलाइन्स तथा तारा एयरलाइन्स बिच लिखित सम्झौता भएपछि परीक्षण उडान गरिएको हो । सफल परीक्षण उडान पछि यहि चैत ९ गते देखि नियमित रुपमा विमान सेवा संचालन हुने बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले बताए ।
काठमाडौ देखि बागलुङ हप्ताको हाललाई दुईवटा फ्लाइट हुने भएको छ । नेपाल एयरलाइन्स र तारा एयरलाइन्सको उडानको क्रममा काठमाडौ बागलुङको यात्रामा १२ सिटको र बागलुङ काठमाडौको लागि पुरै सिटको ग्यारेन्टी नगरपालिकाले गर्ने लिखित सहमति भईसकेको छ ।
अहिलेलाई बागलुङको बलेवा देखि काठमाण्डौ सम्म ६ हजार ५ सय रुपैया हवाई भाडा दर सरकारले निर्धारण गरेको छ । सदरमुकाम देखि विमानस्थल सम्म पुग्ने सडक र धावनमार्ग कालोपत्रे एक बर्ष भित्र गराउने कार्यक्रममा प्रतिबद्धता प्रति।निधि सभाका सांसद डा सूर्य पाठकले जनाएका छन् ।